RAISO DOWNLOAD EDITOR VSDC FREE VIDEO EDITOR - PROGRAMME REVIEW - 2019
Ny iPhone dia fitaovana maro samihafa izay manolo ireo fitaovana maro samihafa. Amin'ny ankapobeny, ny smartphone apel dia afaka mizara tsara ny Internet amin'ny finday hafa - fa izany dia ampy fotsiny ny hanatontosana toerana kely.
Raha toa ka manana solosaina finday, tablette na fitaovana hafa izay manohana ny fifandraisana amin'ny Wi-Fi fidirana, dia azonao ampiasaina amin'ny Internet amin'ny alalan'ny iPhone ianao. Ho an'ireny tanjona ireny, ny smartphone dia manana modem-panaovana manokana.
Mahaiza modem mode
Sokafy ny fanovana eo amin'ny iPhone. Misafidiana fizarana iray "Modem Mode".
Ao amin'ny grafika "Tenimiafin'ny Wi-Fi", raha ilaina dia manova ny tenimiafina ho an'ny tenanao (tsy maintsy faritana tarehintsoratra fara-fahakeliny 8). Manaraka izany, manaova ny asa "Modem Mode" - Mba hanaovana izany, dia avereno ny toerana misy azy.
Hatramin'izao fotoana izao, ny smartphone dia azo ampiasaina hanaparitaka ny Internet amin'ny iray amin'ireo fomba telo:
Amin'ny wifi. Mba hanaovana izany avy amin'ny gadget hafa, sokafy ny lisitry ny mari-pamantarana Wi-Fi. Misafidiana ny anaran'ny toerana misy ny fidirana ary mametraha ny tenimiafiny. Rehefa afaka fotoana fohy dia hisy ny fifandraisana.
Amin'ny bluetooth. Azo ampiasaina amin'ny fifandraisana amin'ny sehatra ahafahana miditra ihany koa io fifandraisana amin'ny Wireless io. Ataovy azo antoka fa Bluetooth dia mavitrika amin'ny iPhone. Ao amin'ny fitaovana iray, sokafy ny fikarohana Bluetooth fitaovana ary fidio IPhone. Mamorona mpivady, izay hanitsiana ny fidirana amin'ny Internet.
Via USB. Fomba fampifandrohana, tonga lafatra amin'ny ordinatera izay tsy manana fitaovana Wi-Fi. Ambonin'izany, noho ny fanampiany, ny haingam-pifaneraseran'ny data dia ho ambony kokoa, midika izany fa haingana kokoa sy haingana kokoa ny Internet. Mba hampiasana io fomba io dia tsy maintsy ampidirina ao amin'ny solosainao ny iTunes. Ampifandraiso amin'ny iPhone ny iPhone, esory izy ary mamaly tsara ilay fanontaniana "Matokia ity solosaina ity?". Amin'ny farany dia mila mamaritra ny tenimiafina ianao.
Rehefa ampiasaina ho modem ny telefaona, dia hiseho eo amin'ny tampon'ny efijery ny tsipika manga, manondro ny isan'ny fitaovana mifandray. Amin'izany dia afaka mifehy tsara ianao rehefa misy olona mifandray amin'ny findainao.
Raha ny iPhone dia tsy manana modem button
Maro ireo mpampiasa iPhone, mametraka ny modem modem voalohany, miatrika ny tsy fisian'ity zavatra ity amin'ny finday. Izany dia noho ny tsy nahatonga ireo fanamafisana mpandraharaha ilaina tao amin'ny gadget. Amin'ity tranga ity, afaka mamaha ny olana ianao amin'ny fanoratana azy ireo amin'ny fomba mahazatra.
Mandehana any amin'ny sehatry ny smartphone. Aorian'izay dia mila manokatra fizarana ianao "Cellular".
Ao amin'ny varavarankely manaraka, mifidiana ny singa "Cellular Data Network".
Ao amin'ny varavarankely izay miseho, tadiavo ny sakana "Modem Mode". Eto ianao dia mila miditra ny fampahalalam-baovao mifanaraka amin'ilay mpihazakazaka ampiasaina amin'ny smartphone.
Anarana sy Password: Esory ireny saha ireny.
Anarana sy Password: Aseho ao amin'ny andalana roa ireo «T.» (tsy misy quotes)
Anarana sy Password: Aseho ao amin'ny andalana roa ireo «Beeline» (tsy misy quotes)
Anarana sy Password: Aseho ao amin'ny andalana roa ireo «Gdata» (tsy misy quotes)
Ho an'ireo mpandraharaha hafa, raha ny fitsipika, dia ireo toetra ireo ihany no voatondro ho an'ny Megaphone.
Miverena any amin'ny sehatra main menu - item "Modem Mode" tokony aseho.
Raha manana olana ianao rehefa mametraka ny modem modem ho an'ny iPhone, dia mametraha fanontaniana amin'ny fanehoan-kevitra - dia hiezaka hanampy amin'ny famahana ny olana izahay.